China Flat fonosana hareza 15m isaky ny horonana 10 m isaky ny mpanamboatra sy mpamatsy | Xinpan
Tady hareza fisaka
Ny hareza fonosana fisaka dia fanovana ny sakana fiarovana amin'ny hareza, namboarina hampiasaina amin'ny toe-javatra feno olona. Flatina sakanana fiarovana consinaina ho toy ny sakana fiarovana, vita amin'ny konsily kasety mihamafy.
Wire Razor Wrap fisaka
Ny hareza fonosana fisaka dia fanovana ny sakana fiarovana amin'ny hareza, namboarina hampiasaina amin'ny toe-javatra feno olona. Flatina sakanana fiarovana consinaina ho toy ny sakana fiarovana, vita amin'ny konsily kasety mihamafy. Ny fiarovana ny sakana amin'ny hareza dia tsy mitovy amin'ny concertola wire razor izay ny coil dia miorina amin'ny fiaramanidina iray, izay mahatonga ny endrika ho matevina kokoa. Ary ny kodiarana mifanila aminy dia mifamatotra miaraka amin'ny staples amin'ny vy vita amin'ny vy. Manome fananana fiarovana avo dia avo kokoa ny hareza fisorohana fisorohana ary tsy dia mahery setra, izay manampy amin'ny fampiasana be azy na zavatra isan-karazany amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe.
Ny tariby hareza fisaka dia natao hiarovana ireo toerana any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe ary rehefa tsy afaka mampiasa sakana fiarovana amin'ny hareza ianao satria ny habeny. Azo apetraka amin'ny karazana fefy sy sakana rehetra ny fiarovana ny sakana amin'ny harom-bolo, ho fanampin'izany, mety hisy fefy maromaro vita amin'ny fantsom-pitaovana misy tadiny.
Ny sakana fiarovana ny hareza fisaka dia manankarena kokoa noho ny sakana fiarovana ny harefo, satria ny famokarana azy dia mila tariby kely kokoa noho izany, ka amin'ireny tranga ireny izay tsy misy fepetra manokana momba ny fiarovana ny fametahana zavatra iray, ny fiarovana ny sakana amin'ny hareza dia mety ho safidy tsara.
Ny fisorohana ny hareza fisolokiana fisaka dia tena avo lenta, na dia somary ambany noho ny an'ny sakana coco konsina aza. Ny kofehy vita amin'ny takelaka tariby dia afaka mitazona ny fananany aorian'ny barrage ary na dia sakafo kely vitsivitsy aza amin'ny toerana samihafa. Ny lafiny iray manan-danja amin'ny tariby konsilinina fisaka dia, amin'ny maha-rafitra fisaka azy, dia tsy mihoatra ny refin'ny fefy izy io, manana endrika tsy dia mahery setra, izay aleony kokoa mamorona sakana amin'ny toeram-bahoaka.
Endri-javatra misy tariby hareza fisaka:
Tsy misy firafitra overhang tsy handratra ny olona tsy manan-tsiny.
Fisehoana madio tsy misy overhang.
Safidy optimum ho an'ny toerana voafetra izay mila filaminana ambony ihany koa.
Azo atao fefy mijoro maimaimpoana.
Ny habe mahazatra dia omena (aseho amin'ny tabilao) ary ny haben'ny mahazatra amin'ny filaharana manokana.
Famaritana ny Wire Razor Flat Wrap
hahavony halavan'ny Spiral Spacing Coil isaky ny Bundle
Ny fonosana fonosana fisaka dia hanatsara ny fahombiazan'ny fefy. Napetraka noho io antony io, ireo olona tsy manan-tsiny dia voaro amin'ny ratra amin'ny fefy marefo tariby raha toa ka matahotra indray ireo mety hiditra.
Ny coil fisaka dia manome sakana madio nefa mahomby rehefa ampiasaina miaraka amin'ny fefy harato.
Ny fametrahana fonosana coil fisaka dia tsotra indrindra rehefa apetaka amin'ny fihoarana ny harato.
Manome sakana avo izy io rehefa apetaka amin'ny rindrina.
Ny fametrahana ny tariby Flat Profile Razor dia tsotra indrindra. Izy io dia azo tohanana amin'ny alàlan'ny fametahana na ny famatorana tariby amin'ny faritra amboniny na amin'ny fomba hafa, amin'ny alàlan'ny fametahana ny rojo amin'ny paingotra misy ary avy eo mametaka andalana tariby mpanohana amin'ny alàlan'ny lavaka ambony amin'ny bracket ary mifamatotra amin'ny tariby Razor aminy.
Na izany na tsy izany dia afaka manome anao ny fiakarana ilaina mijidina izahay, ny famolahana tariby ary ny kofehy mba hahafahan'ny tena miraikitra amin'ny fefy na rindrina.
Teo aloha: Lasary hareza vita amin'ny hareza
Manaraka: Fefy harato fefy fefy fefy zaridaina fefy zaridaina fefy
Vidio Razor Wire
Hareza misy ratra
Karazana tariby hareza